Indoda yanamuhla izama ukugcina ukukhangelwa kwazo zonke izingxenye zomzimba wakhe. Noma kunjalo, lokhu akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi. Ngokuvamile ngezipikili zemilenze kunezibonakaliso zezifo ezihlukahlukene zefungal. Ukwelapha izifo ezinjalo, umuthi omkhulu wemithi ukhiqizwa. Isiza i-Bifosin emangcwabeni ye-nail. Ukubuyekezwa kochwepheshe kubonisa ukuthi umuthi uphephile ngokuphulukisa i-malaise.
Uma umuthi unqunywe
Kuziphi izimo okufanele ukuthenga "i-Bifosin" kusukela ku-fungus le-nail. Impendulo evela kubathengi ibonisa ukusebenza komuthi. Ungathola umphumela osheshayo ngokuqala nje ukwelashwa ngendlela esifike ngesikhathi. Ngezibonakaliso zokuqala zalesi sifo, izitsha ze-nail zishintsha umbala wazo. Ziba abamnyama, ezinsundu, eziphuzi, ezimpunga noma ezimhlophe. Isikhumba eminwe siqala kancane kancane. Amapulangwe e-nail aqala ukuphahlazeka futhi aqhume. Ukuphumelela kokwelashwa kuncike esigabeni sesifo. Ngakho-ke, akunconywa ukuba uqale lesi sifo.
"I-Bifosin" ephuma emkhunjini wezinzipho, ukubuyekezwa okuyizinto ezihle kakhulu, ngokuvamile okushiwo esigabeni sokuqala sesifo. Uma kukhona izibonakaliso zokuqala zokugula, kubalulekile ukuqala ukwelashwa ngokushesha. Isidakamizwa sinomphumela wendawo kuphela. Ngakho-ke, "i-Bifosin" ayinamandla kulezi zimo lapho i-fungus ingena emathanjeni kakhulu.
Yiziphi izici uBifosin analo?
Ukubuyekeza mayelana nomuthi kubonisa ukuthi kulula ukusebenzisa. Phela, itholakala ngesimo se-spray, ukhilimu, isixazululo kanye ne-powder. "I-Bifosin" isithunywa se-antitifungal yanamuhla. Isidakamizwa sikuvumela ukuba ulahle imfucumfucu enomvubelo futhi ifunde, futhi futhi unqobe ukutheleleka okubangelwa i-cocci e-gram.
Isidakamizwa sikwazi ukungena ngokujulile emathisheni esikhumba, ngokushesha kubhubhise izinhlamvu nama cell fungal. Uma lesi sifo sibhekene kabi, khona-ke lesi sidakamizwa sinqunywe ekwelapheni okuyinkimbinkimbi.
Uma kudingeke ukuba usebenzise i-spray kanye nekhilimu ethi "Bifosin" kusuka ku-fungus yezipikili. Ukubuyekeza kubonisa ukuthi izici zomuthi zithembele kufomu lokukhululwa. Isibonelo, amafutha noma isisombululo kufanele isetshenziswe ezindaweni ezithintekile zezipikili nesikhumba ngokunyakaza okunezinhle. Ngokuqondene ne-spray, ingasetshenziswa ukuphatha ngokuphelele unyawo. Futhi, i- "Bifosin" kule ndlela yokukhululwa isetshenziselwa ukuvimbela lesi sifo.
Ungasusa kanjani isipikili esonakele
Uma i-plateyili yesilonda ngokwayo ithinteka yi-fungus, kufanelekile ukusebenzisa ukhilimu noma amafutha. Ukuze wenze lokhu, yenza lokhu okulandelayo:
"I-Bifosin" kumele isetshenziswe endaweni ethintekile yefungus.
Indawo ephathwayo kufanele ivaliwe nge-plaster yezokwelapha noma nge-bandage ekhethekile.
I-compress kufanele igcinwe amahora angu-24. Ngemuva kwesikhathi esibekiwe, i-bandage kufanele isuswe.
Unyawo kufanele lancishwe emanzini afudumele cishe imizuzu engama-20.
Izindawo ezihluthulelwe zezicubu kufanele zisuswe nge-scraper, okuthengiswa kanye nomuthi.
Ekugcineni, sebenzisa ukhilimu noma amafutha e-nail ewonakele bese uvale ibhande.
Ukwelapha kungakapheli isikhathi esingakanani
Kumelwe ngisebenzise isikhathi esingakanani "i-Bifosin" (spray) kusuka ku-fungus ye-nail. Ukubuyekezwa kwabathengi bathi inkambo yokwelapha ixhomeke ebukhulu besifo. Kunemithetho ethile:
Uma izinyawo zithintekayo, kanye nesikhumba phakathi kweminwe, inkambo yokwelashwa ihlala emasontweni amathathu kuya kwangu-4.
Uma ukutheleleka kwesikhumba ebushelelezi kwesikhumba kwenzeka, ukwelashwa kuthatha amasonto amabili kuya ku-3.
I-Candida albicans yokwelashwa kwamafungus ihlala emavikini amabili kuya kwangu-4.
Ukwelashwa kwe-erythasms ne-pityriasis kungathatha amasonto amabili.
Ngezilonda ze-scalp, kuyadingeka ukwelashwa okude. Kulesi simo, inkambo yokwelashwa okungenani inyanga.
Uma ukwelashwa kuyekelelwe ngesizathu esithile, kunengozi yokuphindaphindiwe.
Amathebulethi asuka ekudakwa ngokweqile
Hat-isikhafu: kanjani futhi yini okufanele uyigqoke?
Amagilavu Crochet - ukhululekile kakhulu futhi stylish
Ayres Targaryen: ukuphila nokufa, ifa lokungapheleli Mad King